Warar - Xulashada qalabka qalabka CNC
Xulashada qalabka qalabka CNC
Waqtigan xaadirka ah, qalabka qalabka CNC ee sida weyn loo isticmaalo badanaa waxaa ka mid ah aaladaha dheemanka, qalabka wax lagu karsado ee loo yaqaan 'nitride cubic boron nitride', qalabka dhoobada, aaladaha dahaarka leh, aaladaha carbide-ka iyo qalabka birta xawaaraha sare leh.Waxaa jira darajooyin badan oo ah qalabka qalabka wax lagu gooyo iyo hantidoodu aad ayey u kala duwan tahay. Tilmaamaha waxqabadka ee qalabka qalabka kala duwan ayaa hoos ku taxan.Maaddada qalabka wax lagu goynayo ee mashiinada NC waa in lagu xushaa iyadoo la raacayo qalabka shaqada iyo nooca mishiinka. Xulitaanka qalabka qalabka wax lagu goynayo waa inuu noqdaa mid caqli gal ah marka loo eego shayga la shaqeynayo, qalabka wax goynta iyo ciyaarta sheyga ka shaqeynta, inta badan waxaa loola jeedaa aaladaha farsamada, guryaha jireed iyo sifooyinka kiimikada ee labada ciyaar, si loo helo nolosha qalabka ugu dheer iyo wax soo saarka ugu weyn ee goynta.
1. Qaadashada qalabka wax lagu gooyo oo leh aalado farsamo oo ah walxaha mashiinnada Isku dheelitirka qalabka qalabka jarista ee leh qalabka farsamada ee walxaha mashiinka ayaa inta badan loola jeedaa isku-dheelitirka qalabka goynta qalabka farsamada sida xoogga, adkaanta iyo adkaanta qalabka shaqada. aaladaha kala duwan ee farsamada ayaa ku habboon qalabyada kala duwan ee shaqada. (1) isku xigxiga adkaanta qalabka qalabka waa: aaladda dheemanka> aaladda nitride cubic boron nitride> aaladda dhoobada> carbide> birta xawaaraha sare leh. birta carbide> aaladda dhoobada> dheeman iyo aaladda nitride cubic boron nitride. (3) amarka adadag ee qalabka qalabku waa: birta xawaaraha sare leh> carbide> nitride cubic boron nitride, qalabka alwaaxa iyo dhoobada. leh aalad adag. Adkaysiga qalabka qalabku waa inuu ka sarreeyaa adkaanta qalabka shaqada, guud ahaan looga baahan yahay inuu ka sarreeyo 60HRC. Qalabka qalabku wuu ka sii adag yahay, ka sii fiicnaantiisa ayaa iska caabbinta xiddiguna noqonayaa. Tusaale ahaan, marka xaddiga cobalt-ka ee carbide sibidhka ah kororka, xoogiisa iyo adkeyntiisa ayaa kordha iyo adkeysiguna wuu yaraadaa, waxayna ku haboon tahay makiinada qashin-qubka. Marka maadada cobalt-ka ay hoos u dhacdo, adkeysigeeda iyo xirashada iska caabinta ayaa kororta, waxayna ku habboon tahay dhameystirka.Toollada leh heerkulka heerkulka sare ee heerkulka aadka u sarreeya ayaa si gaar ah ugu habboon goynta xawaaraha sare. Waxqabadka heerkulka sare ee aaladaha goynta dhoobada ayaa awood u siinaya inay ku jaraan xawaare sare, taas oo 2 ~ 10 jeer ka dhakhso badan carbide.
Qalabyada qalabka wax lagu jaro iyo sifooyinka jireed ee sheyga wax lagu shaqeynayo waxay u dhigmaan aaladaha leh sifooyin jireed oo kala duwan, sida, qaboojinta kuleylka sare iyo barta dhalaalaysa ee aaladda biraha xawaaraha sare leh, barta dhalaalaysa sare iyo ballaarinta kuleylka ee qalabka dhoobada, habdhaqanka kuleylka sare iyo ballaarinta kuleylka hoose ee aaladaha dheemanka, iwm, oo ku habboon ka baaraandegidda qalabka shaqada ayaa kala duwan.Marka lagu shaqeynayo qalabka shaqada ee kuleylka kuleylka liita, qalabka qalabka leh kuleylka kuleylka wanaagsan waa in loo adeegsadaa si looga dhigo kuleylka goynta inuu si dhakhso leh u faafo oo hoos u dhig heerkulka goynta. Sababtoo ah kuleylka sare ee kuleylka iyo kuleylka kuleylka, dheeman waa fududahay in laga sii daayo kuleylka jarista mana soo saari doono isbeddel kuleyl weyn, taas oo si gaar ah muhiim ugu ah qalabka wax lagu saxo ee saxda ah ee leh shuruudaha saxda ah ee cabbirka sare. heerkulka qalabka qalabka kala duwan: qalabka dheeman 700 ~ 8000C, qalabka PCBN 13000 ~ 15000C, c Qalabka dhoobada 1100 ~ 12000C, TiC (N) saldhig carbide sibidh leh 900 ~ 11000C, WC saldhig heer sare ah oo ganaax ah carbide sibidh leh 800 ~ 9000C, HSS 600 ~ 7000C. carbide> TiC (N) carbide sibidh ah> HSS> dhoobada si3n4 ku saleysan> dhoobada a1203 ku saleysan. Amarka isweydaarsiga balaarinta kuleylka ee qalabka qalabka kala duwan waa: HSS> WC carbide sibidh leh> TiC (N)> A1203 saldhig dhoobada> PCBN > Si3N4 salka dhoobada> PCD Amarka ka-hortagga shoogga kuleylka ee qalabka qalabka kala duwan waa HSS> WC daawaha adag> si3n4-saldhig dhoobada> PCBN> PCD> TiC (N) daawaha adag> a1203-saldhig ceramics.
Dhibaatada u dhiganta ee jarida qalabka wax soo saarka iyo hantida kiimikada ee sheyga wax soo saarka badanaa waxay tixraaceysaa isku dheelitirka xuduudaha hantida kiimikada sida isku xirnaanta kiimikada, falcelinta kiimikada, faafitaanka iyo kala dirista qalabka qalabka wax lagu gooyo iyo qalabka shaqada. qalabka aaladda ku habboon in lagu farsameeyo qalabka shaqada ayaa ka duwan. (1) dhammaan noocyada kala-goynta heerkulka isku dhejinta qalabka (iyo birta) ee loogu talagalay PCBN> dhoobada> carbide sibidhka leh> HSS. (2) qandhada heerkulka caabbinta ee qalabka kala-goynta kala duwan. waa sida soo socota: dhoobada> PCBN> dheemanka carbide> HSS Awoodda faafitaanka ee alaab-gooyaha (birta) waa: dheeman> si3n4-saldhig dhoobada> PCBN> a1203-saldhig dhoobada. dhoobada salka> PCBN> SiC> Si3N4> dheeman.
Guud ahaan, PCBN, aaladaha dhoobada, carbide dahaarka leh iyo aaladaha carbide ee TiCN salka ku hayaa waxay ku habboon yihiin farsamaynta xakamaynta tirada ee ferrous.